အပျိုကြီးများ ရဲ့ ဒုက္ခ…ဒီလိုပြော တော့ ကျတော့် ကို အပျိုကြီး များ က ဆဲ လိမ့် မယ်….။ – GaMone Media
Homepage / Knowledge / အပျိုကြီးများ ရဲ့ ဒုက္ခ…ဒီလိုပြော တော့ ကျတော့် ကို အပျိုကြီး များ က ဆဲ လိမ့် မယ်….။
အပျိုကြီးများ ရဲ့ ဒုက္ခ…ဒီလိုပြော တော့ ကျတော့် ကို အပျိုကြီး များ က ဆဲ လိမ့် မယ်….။
အပျိုကြီးဆိုတာအပျိူ လေးဘဝတုန်းက ချေခဲ့သမျှ ခုချိန်မှာ တိုင်ပတ်တာပဲ… လေးဆယ်ကျော်မှ ဘဝက စတာ မဟုတ်ဘူး သုံးဆယ် ကျော်တာ နဲ့ ဖူးစာကဆုံးတာ…
မြားနတ်မောင်က အန်ဖရန့်လုပ်ပြီးပြီ အောင်သွယ် တော်ပေ့ခ်က ဘလော့ခံရပြီ… ဗေဒင်ဆရာတွေတောင် အပျိူ ကြီး အချစ်ရေးမဟောပါလို့ ဆိုင်းဘုတ် ထောင်ရပြီ
မခူးပဲ ကြွေမကျရဲ ခူးတော့လည်း ပဲပေးနေပြီး လှည့်ထွက်သွားမှ မှည့်နေပါပြီ အော်လည်း မရတော့ဘူး….
ခက်တယ် ခက်တယ် အပျိူ ကြီးဆိုတာ တိုင်မပေါ် တဲ့ ဆင်းကဒ်လို (Helloတစ်ခွန်းနဲ့လိုရာမရောက် ) ပရိုမိုးရှင်းကာလနဲ့လည်း မရ ဒစ်စကောင့်နဲ့လည်း မဖြစ် မိဘကို တစ်သက်လုံး ဒုက္ခပေးမယ့်အထာနဲ့ အပျုူိ ကြီး လုပ်မှာလို့ ( အငိုမျက်လုံး အပြုံးမျက်နှာနဲ့ပြောသေးတာ )
မရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မယူတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆွဲဖဲပဲ သေသေ ဒေါင်းဖဲပဲ မတက်မတက် ဘဝ တစ်သက်မှာ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကို မစည်းရုံးနိူင်ခဲ့သူတံခွန်လည်း မရှိတက်လည်း မပိုင်နဲ့ဘဝကို အရည်မပါပဲ ထမင်းစားရသလို ခြောက်ကပ်ကပ်
ဟန်းဆက် ဘယ်လောက်မြင့်မြင့် …ချစ်ဆုံး / အာဘွား / ဘာညာ ကွိကွတွေဖုန်းထဲက အသံမထွက်ဖူးတာအပျိူ ကြီး ကိုင်တဲ့ဖုန်း
ဖေ့ဘုတ်တောင်Like နေရာမှာ Love သာပိုအသုံးပြုလို့ ရအောင်ပြောင်း လာ တယ်အပျိူ ကြီးတွေက တစ်ယောက်တည်းပုံတင်လိုက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပုံတင်လိုက်တူလေးတွေထိမ်းနေတဲ့ပုံတင်လိုက် ကြောင်လေး ခွေးလေးတွေနဲ့ပုံတင်လိုက်အဆင့်က …မတိုးတက် မပြောင်းလဲလာဘူး
တကယ်တော့ …အပျိူ ကြီးတွေဆိုတာဘဝကို ကျေနပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့အချစ်တခြမ်းလေဖြတ်ထားတဲ့နှလုံးသားဒုက္ခိတတွေပါ ။
အပ်ိဳႀကီးဆိုတာအပ်ိဴ ေလးဘဝတုန္းက ေခ်ခဲ့သမွ် ခုခ်ိန္မွာ တိုင္ပတ္တာပဲ… ေလးဆယ္ေက်ာ္မွ ဘဝက စတာ မဟုတ္ဘူး သုံးဆယ္ေက်ာ္တာ နဲ႔ ဖူးစာကဆုံးတာ…
ျမားနတ္ေမာင္က အန္ဖရန႔္လုပ္ၿပီးၿပီ ေအာင္သြယ္ေတာ္ေပ့ခ္က ဘေလာ့ခံရၿပီ… ေဗဒင္ဆရာေတြေတာင္ အပ်ိဴ ႀကီး အခ်စ္ေရးမေဟာပါလို႔ ဆိုင္းဘုတ္ ေထာင္ရၿပီ
မခူးပဲ ေႂကြမက်ရဲ ခူးေတာ့လည္း ပဲေပးေနၿပီး လွည့္ထြက္သြားမွ မွည့္ေနပါၿပီ ေအာ္လည္း မရေတာ့ဘူး….
ခက္တယ္ ခက္တယ္ အပ်ိဴ ႀကီးဆိုတာ တိုင္မေပၚတဲ့ ဆင္းကဒ္လို (Helloတစ္ခြန္းနဲ႔လိုရာမေရာက္ ) ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလနဲ႔လည္း မရ ဒစ္စေကာင့္နဲ႔လည္း မျဖစ္ မိဘကို တစ္သက္လုံး ဒုကၡေပးမယ့္အထာနဲ႔ အပ်ဳူိ ႀကီး လုပ္မွာလို႔ ( အငိုမ်က္လုံး အၿပဳံးမ်က္ႏွာနဲ႔ေျပာေသးတာ )
မရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မယူတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆြဲဖဲပဲ ေသေသ ေဒါင္းဖဲပဲ မတက္မတက္ ဘဝ တစ္သက္မွာ ေယာက်ာၤးတစ္ေယာက္ကို မစည္း႐ုံးႏိူင္ခဲ့သူတံခြန္လည္း မရွိတက္လည္း မပိုင္နဲ႔ဘဝကို အရည္မပါပဲ ထမင္းစားရသလို ေျခာက္ကပ္ကပ္
ဟန္းဆက္ ဘယ္ေလာက္ျမင့္ျမင့္ …ခ်စ္ဆုံး / အာဘြား / ဘာညာ ကြိကြေတြဖုန္းထဲက အသံမထြက္ဖူးတာအပ်ိဴ ႀကီး ကိုင္တဲ့ဖုန္း
ေဖ့ဘုတ္ေတာင္Like ေနရာမွာ Love သာပိုအသုံးျပဳလို႔ ရေအာင္ေျပာင္းလာတယ္အပ်ိဴ ႀကီးေတြက တစ္ေယာက္တည္းပုံတင္လိုက္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ပုံတင္လိုက္တူေလးေတြထိမ္းေနတဲ့ပုံတင္လိုက္ ေၾကာင္ေလး ေခြးေလးေတြနဲ႔ပုံတင္လိုက္အဆင့္က …မတိုးတက္ မေျပာင္းလဲလာဘူး
တကယ္ေတာ့ …အပ်ိဴ ႀကီးေတြဆိုတာဘဝကို ေက်နပ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်စ္တျခမ္းေလျဖ တ္ထားတဲ့ႏွလုံးသားဒုကၡိတေတြပါ ။
Previous post ရင်ခုန်စရာ အလှတရားတွေ ကို ထုတ်ပြ လိုက်တဲ့ ပိုပို
Next post ကိုဗစ် လူနာတွေ ကို အိမ်မှာပဲ ထားပြီး အခြေအနေ စောင့်ကြည့်တဲ့ စနစ် ရန်ကုန်မှာ စမည်